Soomaali | The Seattle Public Library
MAXAY TAHAY MAKTABAD GUUD AHAANBA?
Maktabadu...Waa meel wax lagu akhriyo, barto, oo lagula kulmo asxaab. Meel lagu madadaasho.
Maraykanka gudihiisa, bulsho kastaa waxay leedahay maktabad dadweyne. Maktabaduhu waa meelo lagu siiyo adeegyada bilaashka ah qof kasta oo ka mid ah bulshada. Maktabada, waxaad ka deynsan kartaa buugaag iyo aflaam, Ama aad isticmaali kartaa kombuyuutarka si aad u fiiriso emaylkaaga ama u eegto Internetka, casharo uga qaadatid kumbuyuutarka, Ingiriisi ama muwaadinimo, iyo waxyaabo badan oo kale - oo dhamaan bilaash ah! Waayo? Waxaan aaminsanahay furnaanta iyo helitaanka macluumaadka bilaashka ah in ay tahay u daruuri dimuqraadiyada qarankeena.
Maktabada waxa ka buuxa fikrado, macluumaad, waxqabadyo iyo adeegyo. Dadka ka shaqeeya maktabadu waxay leeyihiin naxriis iyo taageero oo waxay u heelan yihiin inay ku gargaaraan. Waxay halkan u joogaan inay ka jawaabaan su'aalahaga oo ay ku siiyaan adeegyada iyo macluumaadka aad u baahan tahay.
Booqashada maktabadu waa raaxo! Waxaan leenahay 28 qaybood oo kuu adeega. Kaalay oo fiiri dhismaha yaabka leh iyo shaqada farshanxanimo ee ku yaal qaybaha badan, sida jaranjarada socota ee hadlaysa, oo ku yaala maktabada Central,120 koobabka shaaha oo saran gidar aad ka arki kartid maktabada International District, iyo saqaf ay kuu daboolan tahay dhir oo ku yaala maktabada Ballard.
Waxa kale oo jira waxyaabo badan oo aad ka qaban karto Maktabada gudaheeda oo aanad malayn karin!
Jadwalkayaga ee maktabada (oo ingiriisi ah) waxa ka buuxa waxqabadyo xiiso leh, oo aad wax ka baran karto oo kuna raaxaysan karto isla marahaantaas. U soo kaxayso qoyskaaga, asxaabtaada iyo jiiraankaaga Maktabada oo ku raxayso muusiga, qoob-ka-ciyaarka iyo barnaamijyada kale ee dhaqanka. Haddii aad rabto inaad ogaato wax yaabaha ka socda maktabada, way sahlan tahay… Na warso! Waxa kale oo aad ka heli kartaa jadwalka internetka ee dhacdooyinka oo Ingiriisi ah ama joogtayso in laguugu soo diro email jadwalka toddobaalaha ah oo Ingiriisi ah oo taxaya dhacdooyinka soo socda.
Dhamaan waa bilaash - Maktabadaada!
MA RABTAA INAAD WAX KALE OGAATO?
Kuwaasi waa qaar ka mid ah adeegyo badan oo aad ku arki doonto Maktabada. Haddii aad qabto su’aalo ama aad jeceshahay qof inuu kaa gargaaro si aad u isticmaasho maktabada, shaqaalaha maktabada ayaa diyaar u ah inay ku gargaaraan. Fadlan naga soo wac 206-684-0849 ama email noogu soo dir lew@spl.org.
Waxa kale oo aad warsan kartaa xubin shaqaalaha maktabada ah inuu yimaada xarunta bulshadaada ama xaflad. Waxay idiin sheegi doonaan adeegyada iyo barnaamijyada Maktabada ama waxay kaa gargaari doonaan helitaanka karaka Maktabada ama qaadashada buugaagta. Wac 206-386-4661 si aad u booqato.
Kabasiifiican, ee booqo Maktabada Dhexe ama Laanta NewHolly si aad u aragto inta wax ka yaala Afrikada Bari.
Mahadsanid xiisaahaag Maktabada dadweynaha ee Seattle. Waxaan dhawraynaa inaan ku aragno... Ku soo dhawow Maktabadeena!
Mahadsanid Saaxiibta Maktabada Dadweynaha ee Seattle bixinta kharashka lagu soo saaray horudhacan Maktabada.